संजय भन्छन ‘बजार बिस्तारमा हातेमालो गरौ’
July 20, 2017	Comments Off on संजय भन्छन ‘बजार बिस्तारमा हातेमालो गरौ’
काठमाण्डौ , यतिबेला नेपाली फिल्म लगानी उठाउने मामिलामा विदेशी मार्केटको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय नेपालसंगै विदेशको मार्केटलाई पनि ध्यानमा राखेर फिल्म निर्माण गर्ने गरिन्छ । नेपाली फिल्मको लागि विदेश मार्केटमा बलियो अस्ट्रेलिया हो । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मको प्रदर्शनको हिसाबले हेर्ने हो भने अस्ट्रेलिया अगाडी आउछ …
यसकारण स्यारोनले दुखाईन चित्त !
July 20, 2017	Comments Off on यसकारण स्यारोनले दुखाईन चित्त !
काठमाण्डौ , गत हप्ता रिलिज भएको फिल्म ‘सायद २’ की डेब्यु नायिका स्यारोन श्रेष्ठले फिल्मका निर्माता सुनिल रावलले आफ्नो चित्त दुखाएको बताएकी छिन । उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत निर्माता रावल बोलेको शब्द प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै केहि गुनासो पोखेकी छिन । स्यारोनले निर्माता रावलले आफ्नो पैसामा मस्ती गरेको आरोप प्रति …
सकियो ‘बब्बी’ को पोखरा छायाँकन
July 20, 2017	Comments Off on सकियो ‘बब्बी’ को पोखरा छायाँकन
काठमाण्डौ , मिलन चाम्सको निर्देशनमा तयार भईरहेको फिल्म ‘बब्बी’ को पोखरा छायाँकन सकिएको छ । नर्वे पछी पोखरामा फिल्मांकन गर्न पुगेको युनिटले अब काठमाण्डौमा छायाँकन गर्नेछन । बायोपिक फिल्ममा कविता गुरुङ र उमेश थापाको प्रेम कथा देखाइएको छ । यी दुईको प्रेम कथालाई नै सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराईले पटकथा लेखेका हुन् …
Page 975 of 1,410« First...950960970973974975976977»9809901,000...Last »